Date My Pet » Best First Date Tips Vanhu
misi First inogona tsinga-wracking. Pane zvimwe mibvunzo inoverengeka kumhanya kuburikidza pfungwa dzake izvozvi. sei kutakurira pachake? Kupi iye amutore? Anofanira kutaura pamusoro? dekara, zviri zvikuru zvakajairika kunzwa marwadzo pre-kutanga musi kufunganya. No basa sei zvinoitika, kuwana kuti musi pakarenda wake kuti ugutsikane. Danho Rokutanga riri shure kwake uye iye zvino anogona kufunga kusika zvakanakisisa-zvinoita musi ruzivo kuti vaviri.
waitwa pakutanga zvinhu zvose, kunyanya kana mukomana ari kutsvaga munhu zvinogona-refu naye. Pasinei sei asvika musi wokutanga (kufambidzana Apps, muchikoro, itirana shamwari, chero ingava), pane mamwe mazano ane kuyeuka kuti pave pfungwa nokusingagumi - uye kumanikidza kwake kuti "hongu" musi wechipiri.
Kuziva Date Location Asati
Kana ari kukurukurirana naye pamusoro wenyaya, zvakakosha kutaura zvimwe zvinhu kunze kutanga. Aigona urove kukurukura pamusoro wake zvinhu uye mubereko uye kuziva chii yake yakanaka yokutanga musi nzvimbo yaizova. Chokupedzisira chinhu vaviri vanoda chinofanira rakabayirwa munzvimbo kuti kusununguka. A mamiriro ezvinhu anoda matongo ichi chii angadai vanokwanisa kunge inoshamisa rokutanga musi. Iye ave hwakanaka chisvusvuro uye firimu, asi yakawanda vakadzi mazuva ano vanosarudza chinhu zvishoma kunakidza. Panotova nengano vakabudirira kunakidza misi nenguva anokanda neeSultan! Chinhu chikuru kurangarira kuwana chiitwa vaviri tinakidzwe uye kuumba Muitiro unobatanidza ruzivo.
Kuonekwa ndikazviidza. Nguva dzose pfeka zvinoratidza kufadza. Izvi hazvigoni kusimbiswa zvakakwana. Hapana zvikuru dzoro kure kuti mukadzi kuona wake zuva kuratidza panguva classy French kuresitorendi zvakakura-kura zvikabudura uye Hoodie. Runako rwomukati Counts zvakare, ehe saizvozvo, asi zvakakosha kuti amuratidze kuti anomutora zvakakomba nokuita kupfeka zvakanaka nokuda chiitiko. Zvinoratidza kuti anokoshesa nguva yake uye boka. Uye achiri pairi, anofanirawo nechokwadi kuti nomuroori pachake zvakanaka. Kudimburira nzara avo, kuzora mafuta kuti bvudzi, uye kunhuhwidza zvakanaka.
Iva nenguva. Izvi ruzha zvakafanana vakawanda zano kuti aigona kushandisa kwese, asi zviri kunyanya chokwadi pano. Hapana chinhu yokudadira pane kutendeukira kusvika musi hafu yeawa kusviba uye disheveled. Tsvagurudza apo nzvimbo zvakanaka kare uye kuronga komiyuta yako maererano. Kunyange siya zvishoma mangwanani kana zvichibvira. Patakasvika pamusoro 15 maminitsi mangwanani kusvika zuva kunogona kumubatsira kuita zvimwe prep zvakafanana tsvakai wakakwana tafura. Patakasvika pane nguva zvakare chiratidzo tsika dzakanaka. Kuipa zvinogoneka Mugumisiro kwaari kufunga iye wacho akamira. Ratidza kuti chivalry haisi akafa asi!
Bvunza mibvunzo uye kunyatsoteerera kuziva kwaari nani. Musi wekutanga ndiwo mukana yakanakisisa yokuziva naye. Anofanira kuita zvose zvaanogona kuramba pfungwa dzake pamusoro wake oga. Izvi zvinoreva kuisa foni yake uye kuramba ziso kuonana. YeNodhi uye kunyemwerera uye kumurega kuziva iye zvichikurukurwa vakateerera. Her kuzviremekedza Hurukuro nzira yake ichiita kuti azive kuti ari pamusoro uye zvakakosha kuti raFungisisa. Iye haasi kuzviita kwaari kurangarira, iye zvakare kuita pachake. Anofanira kuwana chii kwaari kuti asarudze kana iye ari kurudyi ikodzere iye.
Kuramba uchiita Conversation
A chakanaka conversationalist anogara anoyevedza. Haisi pamusoro kuteerera kutaura naye mutely, zviri nezvokusika hune uye asingakanganwiki shure uye richiyengerera. Anofanira kugadzirira nyora mibvunzo kare kuita naye zvinobudirira. Kana ane katsika kutaura incoherently kana awkwardly, izvi zvinogona kuva huru nzira kudzivisa matambudziko aya. Anofanira kuyera chii ari akazendamira akananga panguva dating. Vakadzi vose vakafanana uye kutombonaka kuita generalize. Vamwe vakadzi vanosarudza kuramba kutaura chiedza uye pamusoro-pamwero pachake. Talk nezvemhuri, shamwari, uye dzinovaraidza. Kana mafirimu uye mumhanzi. Vamwe vakadzi vanoda yokunyatsoongorora zvakadzama. mafungiro, unyanzvi, uye zviri kuitika ndivo nyaya shoma kudzamisa kurukurirano. Edza usaparadzire chitendero kana enyika.
Regai Taura About Exes
Just regai. Nepo zvakakosha kudzidza nemumwe nhoroondo kufambidzana, zviri GARA pfungwa dzakaipa dote pamusoro exes. Gara kure kwazvo vachipikisana naye pamusoro munhoroondo dzeupombwe. Izvi zvinogona kuita kuti iye auye kure vakachenjera, nokudzora, uye zvichida pfungwa. Pane rimwe divi, haafaniri enyuchi hono vanenge sei Eks rakanga rakaipisisa munhu munyika. Izvi zvinoratidza pachena haana mberi, uye hapana mukadzi kwaye anoda akazvifukidza nemumwe munhu akafanana kuti. Ramba classy, vakomana!
Remekedza Personal Miganhu
Anofanira kuramba ari ndagadzikana Aura uye kunzwisisa zvinokosha muviri mamiriro, uye chii subliminal mashoko aigona kuva achituma nokusaziva. Kana zviri firimu musi, haafaniri kuedza yekare ruoko-pamusoro-the-bandauko kumunyengera nguva yokutanga kumativi. Vakadzi kazhinji kuratidza varume vavo kufarira nokuda anobata maoko avo kana dzimwe nzira chaiko noruzhinji. Nzwisisa kuti iye anonzwa pamusoro pachedu nzvimbo uye kuremekedza kwake mafungiro. Hapana anoti 'creepy' pane kuwana handsy uye grabby zvakare nokukurumidza.
Kungoti ine Bill
Izvi pamwe kuzova vasingabvumirani kutora, asi anofanira nguva dzose unongoda kuti ine bhiri. Kurukurai rwaparidza ichi uye kumurega kuziva tisingazvioni kuti iye ari kutarisirwa kubhadhara mugove wake rugwaro urwu. Rangarirai vakomana, hazvina zvakachipa kutarisira munhu mari voga. Regai kuita hombe mairi, chete kumurega aizviziva. kuti nzira, ari kupedza nguva naye nekuti zvaanofarira kambani yake uye kwete nokuti anonzwa kuti sungiro. Vakadzi avo zvachose kutarisira vanhu petsoka bhiri nguva yokutanga kumativi zvinoodza kodzero kana mupfungwa isina. Uyu chihombe dzvuku mureza kuti anofanira kucherechedza. Iye haasi kuita iye nyasha vakabuda naye, iye ikoko nokuti iye anoda iye.